Inona no tokony ho fantatrao momba ny ankizy ao amin'ny 2 ka hatramin'ny 7 taona
Infografika: inona no tokony ho fantatrao momba ny ankizy amin'ny 2 ka hatramin'ny 7 taona
Poster 12.07.2018 12.07.2018 reny
Ny ray aman-dreny dia tia ny tsy fisiana sy ny tsara ho an'ny ankizy any am-pianarana. Matetika anefa izy ireo no tsy mahalala hoe inona no tokony hatao amin'ny fahantrana, ny aretina, ny fitiavan-tena. Toa ireny no fahadisoana fanabeazana na toetra mampihoron-koditra, izay tsy maintsy ampiharina haingana amin'ny zaza.
Fa marina izany taona, izay mitaky fihetsika manintona kokoa amin'ny olon-dehibe, ny fandraisany anjara sy ny fitarihana. Ny ankizy dia hiatrika ny zava-drehetra, fa mila manampy amim-pahamendrehana fotsiny izy ireo ary tsy mangataka ny tsy an'ity taona ity.
Ity infografika ity dia mampiseho ireo singa fototra izay manavaka ny ankizy amin'ny 2 ka hatramin'ny 7 taona. Matetika izy ireo no mampalahelo ny ray aman-dreniny, saingy raha ny marina - izany no toetry ny ankizy tsy ampy taona.
Ireo endri-javatra karazana ankizy avy amin'ny 2 hatramin'ny taona 7
Ny ankizy hatramin'ny 2 ka hatramin'ny 7 taona dia iray amin'ireo sokajin'olona tsy manam-pahaizana indrindra. Tsy mahafantatra ny fomba fisainana indroa izy ireo, manao zavatra maro atsy, mifehy ny fihetseham-pony. Afaka miavonavona izy ireo, tsy mety milefitra ary tsy mankatò, ary ao anatin'ny iray minitra dia hihomehy miaraka amin'ny fihomehezan'izy ireo ary hameno ny toerana manontolo amin'ny hafaliany.
Ankizy avy any 2 mba 7 taona mafy ny hitondra tena tsara, ny fikasana tsara haingana tonga tsinontsinona. Fa ny olon-dehibe tsy misy tsara kokoa noho ny fitsapana ny fahamatorana, noho ny fifandraisana tamin'izy ireo. Fa ny immaturity antony tsara: ny atidohany ao amin'ny dingan'ny fandrosoana, dia ho afa-tsy telo taona voalohany eo amin'ny fiainana 100 1000 tapitrisa tapitrisany miliara Mason'ny mamorona vaovao neural fifandraisana, ka ho eo ambanin'ny toe-javatra tsara.
Ny ati-doha dia tsy mahavita feno fampidirana hatramin'ny 5-7-taona, ary izany no toetry ny ankizy marefo kokoa - hatramin'ny 7-9 taona (ireo ankizy no mora mahatsapa kokoa ivelany stimuli).
Tsy fahampian'ny fifehezan-tena sy ny fikotranana
Ny ankizy ao amin'ny 2 ka hatramin'ny taona 7 dia tsy manao tsinontsinona satria ny atidohany dia afaka mifantoka fotsiny amin'ny eritreritra na fahatsapana iray isaky ny fotoana. Manao fihetsiketsehana tsy an-kijanona izy ireo ary tsy afaka mandray an-tanana ny mety ho fiantraikan'ny fihetsik'izy ireo.
Mila mifandray sy mifanakaiky
Ny ankizy ao amin'ny 2 ka hatramin'ny taona 7 dia mitady ny fifandraisana amin'ny olon-dehibe, satria mbola tsy afaka ny hisaraka izy ireo. Ny maha-akaiky ny olon-dehibe azy no tena ilaina indrindra, ary mila miala sasatra eo amin'ny fiahiantsika izy ireo ary matoky antsika mba hitarihantsika azy ireo. Tsy tokony miasa izy ireo mba hahazoana ny fitiavana sy ny fifantohantsika.
Ireo ankizy ao amin'ny 2 ka hatramin'ny 7 taona dia mora manohitra rehefa mahatsapa ho voatery na fehezin'ny olona tsy ankatoavina izy ireo ankehitriny. Mba hampihenana ny fanoherana, dia zava-dehibe ny mamantatra ny sainy aloha ary manetsiketsika ny faniriana hanaraka, ary avy eo dia maneho ny fangatahany na manova ny karazana asa hafa.
Ny ankizy avy ao amin'ny 2 ka 7 dia tia milalao ary manana rafitra nentim-paharazana mba hijerena, hisafidy ary hanao fikarohana. Ao anatin'ilay lalao dia noforonina ho toy ny olona iray ny ankizy, izay hanampy azy haneho sy haneho tena amin'ny tena fiainana. Ny ankizy dia tokony hilalao mba hahafantaran'izy ireo ny fironany, ny famotsorana ny fihetsehampo, ny hampivelatra ny fahaiza-mamorona ary ny hamaha ny vahaolana azo atao amin'ny olana.
Famaritana ny fahadisoam-panantenana sy ny herisetra
Ny ampahany amin'ny atidoha tompon'andraikitra amin'ny fihenanam-pihetsika sy ny fihoaram-pahefana manintona mafy amin'ny fotoanan'ny fahasosorana amin'ny ankizy 2 hatramin'ny taona 7 dia mbola eo amin'ny fampandrosoana. Rehefa tezitra ny ankizy, dia mora vaky izy ireo. Ilainy ny fandraisana anjaran'ny olon-dehibe izay hanampy azy ireo hiatrika ireo fihetseham-po mahery vaika ireo.
Ny fihetsika tena mifototra amin'ny tena dia ny toetra mampiavaka azy, satria ny fandrosoana ara-pahasalamana dia midika fa ny voalohany dia tsy maintsy mahatakatra ny tenany, mamolavola hevitra ho an'ny tenany, ary aorian'izany dia ho vonona amin'ny fifandraisana ara-tsosialy izy ireo. Alohan'ny hanantenanao azy ireo hahatakatra ny hafa dia tsy maintsy manampy azy ireo aloha ianao.
Tahotra ny fisarahana
Ny ankizy ao amin'ny 2 ka hatramin'ny 7 taona dia tena mila fifampiresahana, ary midika izany fa haniry mafy izy ireo ary hanahy amin'ny fotoana fisarahana miaraka amin'ny votoatiny fototra. Raha avelantsika hikarakara olon-dehibe hafa izy ireo, dia tokony ho tony tsara izy ireo mba hahatsiaro ho voaro. Ny fotoan'ny torimaso dia heverina ho toy ny fisaratsarahana, ka matetika izy ireo no manohitra ny fametrahana.
Ny ankizy avy amin'ny 2 hatramin'ny 7 taona dia miresaka ny zava-drehetra, manamarina ny zava-misy rehefa misy izy ireo. Tsy ara-politika sy ara-diplaomasia no tsy azy ireo. Ny zava-marina dia hoe miezaka fotsiny izy ireo hahatakatra ny eritreriny sy ny fihetseham-pony, fa tsy mandinika ny fitsipika ara-tsosialy sy ny zavatra antenainy.
Tsy fanajana ny hafa
Ny ankizy avy amin'ny 2 hatramin'ny 7 taona dia mijery an'izao tontolo izao avy amin'ny toerana tokana, ary matetika amin'ny azy manokana. Rehefa azony atao ny mandray anjara amin'ny fomba fijery iray (ary mety hitranga izany eo amin'ny taona 5 sy 7 taona), dia tsy afaka ny hanisy fiheverana ny fihetseham-pony fotsiny izy ireo, fa ny fihetseham-pon'ny hafa ihany koa. Ary mandra-pahatongan'izany, ny olon-dehibe dia tokony hitarika azy ireo amin'izany ary hanampy azy ireo hifanerasera amin'ny olon-kafa.
Shyness miaraka amin'ny olon-tsy fantatra
Ny fahamaotinana dia fikolokoloana eo amin'ny fitaovana izay natao mba hiarovana ny fifandraisana eo amin'ny olon-dehibe sy ny zaza. Tsy mila miady amin'ny fahantran'ny ankizy isika, fa mampiditra azy ireo amin'ny olona avy amin'ny tontolo iainany.
Deborah MacNamara (Debora MacNamara) - mpanoratra ny boky "Fandriampahalemana. Game. Fampandrosoana: ahoana no ahafahan'ny olon-dehibe mitombo zaza, ary ny ankizy madinika dia manangana olon-dehibe. "
← Ny famitahana dia mampiharihary ny fanahy sy ny vatana
Ny tokony hatao amin'ny fahavaratra →